Zvapupu zvaJehovha Vanhu Vakaita Sei?
Pane Zvapupu zvaJehovha zvaunoziva here? Unogona kunge wakavakidzana nevamwe vedu, muchishanda mese kana kuti muchidzidza mese kuchikoro. Kana kuti tinogona kunge takambotaura newe nezveBhaibheri. Tinombova vanaani, uye sei tichiudzawo vamwe zvatinotenda?
Takangoitawo sevamwe vanhu. Tinobva kwakasiyana-siyana uye mamiriro edu ezvinhu akasiyanawo. Vamwe vedu vaimbova mune zvimwe zvitendero, uye vamwe vedu vakanga vasingatendi muna Mwari. Tisati tava Zvapupu zvaJehovha, tese takazvipa nguva yekunyatsoongorora zvinodzidziswa neBhaibheri. (Mabasa 17:11) Takabvuma zvatakadzidza, tikasarudza kushumira Jehovha Mwari.
Tinobatsirwa nekudzidza Bhaibheri. Tinosangana nematambudziko uye tinokanganisa sezvinongoitawo vamwe vanhu vese. Asi nekuti tinoedza kushandisa zvatinodzidza muBhaibheri, upenyu hwedu hwakavandudzika. (Pisarema 128:1, 2) Ichocho ndicho chimwe chikonzero chinoita kuti tiudzewo vamwe zvinhu zvakanaka zvatakadzidza muBhaibheri.
Tinoita zvinodiwa naMwari. Tinoita zvinotaurwa muBhaibheri kuti ndizvo zvinodiwa naMwari, uye izvozvo zvinoita kuti tive vanhu vanofara, vanoremekedza vamwe, vakatendeka uye vane mutsa. Zvatinodzidza zvinoita kuti tive vanhu vakanaka uye vanogarika navo. Zvinobatsirawo kuti vari mumhuri vave neunhu uye vabatane. Tinoziva kuti “Mwari haasaruri,” saka tiri mhuri yakabatana zvechokwadi kunyange zvazvo tichibva munyika dzakawanda. Hatiparadzaniswi nezvematongerwo enyika kana kuti nekusiyana kwemarudzi edu. Semunhu ega ega tinongovawo vanhu vakafanana nevamwe, asi sesangano takasiyana chaizvo nevamwe.—Mabasa 4:13; 10:34, 35.
Zvapupu zvaJehovha zvakafanana papi nevamwe vanhu?
Zvapupu zvaJehovha zvakabatsirwa sei nekudzidza Bhaibheri?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvapupu zvaJehovha Vanhu Vakaita Sei?
jl chidzidzo 1